Soomaalida ku nool Shiinaha oo ku dedaalaya inaan la gudbin meydka haweeney Soomaali ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Soomaalida ku nool Shiinaha oo ku dedaalaya inaan la gudbin meydka haweeney Soomaali ah
13th May 2014 A warsame Af Soomaali 0
Bakin – Mareeg.com: Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka China ayaa dedaal ugu jira sidii u baajin lahaayeen in la gubo meydka gabar Soomaaliyeed oo ku geeriyootay dalkaas, kadib xanuun muddo hayey.
Guddoomiyaha Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Shiinha, Cali Macow oo u warramayey RM ayaa sheegay in Jaaliyadda Soomaaliyeed haatan ku talo jiraan in ay dalka Soomaaliya u soo ambabixiyaan marxuumadaas, maadaama dalkaasi meydka la gubo.
Cali Macow waxa uu sheegay in ay ururiyeen lacag ka badan $30 kun oo dollar oo ku baxeysa soo qaadidda meydka haweyneydaas, lacagahaasoo ay iska soo uruuriyeen ganacsatada iyo guud ahaan jaaliyadda dalka Shiinaha ku nool, waxaana sidoo kale gacan ka geystay arrintaasi safaaradda Soomaaliyeed ee dalkaasi.
Guddoomiyaha Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Shiinaha, Cali Macow ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed ee doonaya iney qaxooti ahaan ugu noolaadaan dalkaasi ineysan ku kadsoomin, isagoo tilmaamay iney ku dhici kara dhibaatada hadda taagan.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in Shiinuhu waqti u qabtay dhoofinta meydka haweeneyda Soomaalida ah, haddii kale meydkeeda la gubi doono sida dhaqanka ka ah dalkaas.
somalia:Govt. Sends Plane to Wounded People
Haweeney Soomaali ah oo sheegtay in booliska Kenya ka tuuray daar 5 dabaq ah